Yiwu Mumiriri - Yiwu Mia Imp & Exp Co., Ltd.
Yiwu Agent Basa
Yiwu iguta rakakura kwazvo mukutengesa guta pasi rese. Yiwu musika unovhura mazuva ese kunze kweCNY, ine mukurumbira wezuva nezuva Canton Fair. Pazasi pane kuiswa kwakadzama kwenzvimbo yedu yekushanda uye sevhisi, uye musika weYiwu, ndinovimba unogona kuva nemamwe mazano mushure mekuwongorora.
Yedu Kushanda Maitiro uye Sevhisi
Yakagadzwa muna 1982, Yiwu Commodity Market ndeimwe yemabhizimusi akakura ekutengesa zvinhu kuChina, ayo ane 5.5 mamirioni emabhizimusi-metered nzvimbo dzebhizimusi, anopfuura zviuru makumi manomwe nezvishanu zvitoro zvisiri pamhepo miriyoni nemitengo yezvinhu, uye inokwezva vanopfuura zviuru mazana maviri negumi nezviuru zvevashanyi vezuva nezuva. Inotumidzwa zita rekuti "musika mudiki wepasi rose wezvinhu zvihombe" neUnited Nations, World Bank, Morgan Stanley nemamwe masangano ane chiremera.
Zvinhu zveYiwu Commodity Market zvakatumirwa kunyika mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nematatu. Gore rega rega zvinopfuura zviuru mazana mashanu nemakumi manomwe emidziyo midziyo zvakatumirwa kunze kwenyika. Kune 3,059 zvachose mahofisi anomiririra emamwe mabhizinesi ekunze, uye huwandu hwevagari vekunze vemabhizinesi hwapfuura zviuru gumi nezvitatu.
UNHCR (United Nations High Commissioner Yevapoteri), Ministry of Foreign Affairs nemamwe masangano vakagadzira nzvimbo yekutenga ruzivo muYiwu Commodity Market.
Kubva 2006, Ministry of Commerce yePeople's Republic of China yakaburitsa Yiwu-China Commodities index uye neindasitiri chiyero che "Commodities Classification uye Code" zvakateedzana, zvinoreva kuti Yiwu Commodity Market yakawana kodzero dzakasimba pamitengo nemipimo mune zvepasi rese zvigadzirwa. kutengesa.
Yepasi Pose Kutengeserana Mart Dunhu 1
Yakagadzwa muna Gumiguru, 2001, Yiwu International Trade Mart Dunhu 1 inoiswa zviri pamutemo kushanda musi wa22 Gumiguru, 2002, inogara 420 Mu uye inzvimbo yekuvakira 340,000 mativi emamita ine huwandu hwakazara hwemamiriyoni mazana manomwe emamiriyoni.
Yepasi Pose Kutengeserana Mart Dunhu 3
inodada 460,000 m2 nzvimbo yekuvaka, pamusoro pe6000 matumba akajairwa e14 m2 kune yega pane pasi 1 kusvika 3, anopfuura mazana matanhatu matumba e80-100 m2 pauriri 4 ne5 uye inogadzira nzvimbo yekubudisira iri padenga rechina.
Yepasi Pose Kutengeserana Mart Dunhu 5
International Trade Mart District 5 ndicho chirongwa chepamberi cheYiwu manisiparati eDare komiti uye hurumende yeYiwu yekunyatsoita pfungwa yesainzi yekusimudzira, uye nekunyanyisa kusimudzira kuvakwa kweYiwu seguta renyika rekutengeserana.
Yepasi Pose Kutengeserana Mart Dunhu 2
Yakavhurwa musi wa22 Gumiguru, 2004, International Trade Mart District 2 inotora nzvimbo yemusika ye483 Mu uye zvivakwa nzvimbo inopfuura 600,000㎡, uye inodada pamusoro pematumba zviuru zvisere uye inounganidza vanopfuura zviuru gumi zvevabhizinesi.
Yepasi Pose Kutengeserana Mart Dunhu 4
Zvepamutemo zvakaiswa mukushanda musi wa21 Gumiguru, 2008 Yiwu International Trade Mart Dunhu 4 inotora 1,080,000 m2 nzvimbo yekuvaka uye inobata pamusoro pe16,000 matumba. Icho chizvarwa chechitanhatu cheYiwu misika munhoroondo yayo yekuvandudza.
Huangyuan Hanzu Market
Yiwu Huangyuan Hanzu Musika iri munzvimbo inonyanya kubatikana muguta reYiwu. Kufukidza iyo yakazara nzvimbo ye117 mu uye yekuvaka nzvimbo ye420,000 mativi emamita.